i-counterflow pellet epholileyo,umatshini wokupholisa wokupholisa i-pellet ngeepellets ezishushu
1.Yamkelani ukutya okuvaliweyo komoya, indawo enkulu yomoya, Impembelelo epholileyo yokuphola.
2.Isixhobo esikhupha izixhobo sisebenzisa uhlobo lokubuyisela isilayidi, ukuqhuba okuzinzileyo nokuthembekileyo, incinci yokuhlala.
3.Ubushushu bepellets zokupholisa abuyi kuba ngaphezulu kumaqondo obushushu afileyo + 3~ 5 ℃, ikwalungele nokupholisa isixhobo.
4.Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza ngokulula kunye nokucoca, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu.
Njengoko sonke sisazi, iipellets zokugqibela eziveliswe ngu ifile yeglasi yokufa zithambile kwaye zifumile kubushushu obuphezulu, ke azikwazi ukuhambisa kwaye zigcinwe kwangoko kwaye zifuna ukuphiliswa kuqala. Ke ipellets kufuneka zidityaniswe ukuze zisuswe umswakama kunye nobushushu obuvelisiweyo kwimeko yendawo kunye nokuntywila
feed ipelelet umatshini opholileyo usetyenziswa ngokubanzi ukutshatisa kunye nenkqubo yokuthambisa ukutya kwesityalo se pellet, ejolise ekuqhubeni phambili ukuvuthwa kwezixhobo kunye nokuphucula umgangatho weepellets zokutya kunye nokuxhathisa amanzi. Ngeempawu zesidanga esiphezulu se-automation kunye neteknoloji ephezulu, Umatshini opholileyo wokupholisa ipelelet sisixhobo esifanelekileyo kwimveliso yemizi-mveliso yokutya okhethekileyo emanzini kunye nokondla okuphezulu kwizilwanyana zasekhaya. 2 imisebenzi:Pholisa ubushushu be pellet kwaye unciphise ukufuma kwepeleth. Ubushushu obuphuma kumatshini wepllet kubushushu obungu-70 ～ ～ 90 ℃,nangomatshini opholileyo wepelete,iqondo lobushushu liza kuba ngaphantsi kwe-3 ℃ ～ 5 ℃ ngaphezu kweqondo lobushushu begumbi,umatshini opholileyo wokupholisa ipelethi wenza ukufuma kwepelethi kungaphantsi kwe-12.5%, elungileyo ekugcinweni nasekuhanjisweni kwepelethi.
Iimpawu zokuPholisa iFundise uGrunt Pellet
1.Ukupholisa i-pellet kuthatha ithuba lokupholisa imigaqo-siseko yangoku yokupholisa i-pellet impahla enobushushu obuphezulu obufumileyo. Inokuthintela umbandela opholileyo wokuphazamiseka xa umoya obandayo unxibelelana nezinto ezishushu, yiyo ke enokuthintela imbonakalo ye-pellet ivelise i-crazings.
2.Itanki yokupholisa yamkela uyilo lwe-octagon, onokuqinisekisa ukuba ukupholisa akukho ii-angles ezifileyo.
3.Yamkelani ukutya okuvaliweyo komoya, indawo enkulu yomoya, Impembelelo epholileyo yokuphola.
4.Isixhobo esikhupha izixhobo sisebenzisa uhlobo lokubuyisela isilayidi, ukuqhuba okuzinzileyo nokuthembekileyo, incinci yokuhlala.
5.Ubushushu bepellets zokupholisa abuyi kuba ngaphezulu kumaqondo obushushu afileyo + 3~ 5 ℃, ikwalungele nokupholisa isixhobo.
6.Isantya sokupholisa esiphakamileyo kunye nefuthe lokupholisa elithandekayo. Ukupholisa i-pellets epholileyo kunokupholisa i-pellets ezininzi ngelixa kugcinwe umgangatho olungileyo we-pellet.
7.Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza ngokulula kunye nokucoca, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu.
Yintoni ekufuneka iqatshelwe kwiNkqubo yokuPholisa?
1. Ukupholisa kunokuchaphazela ngqo umgangatho weepellets zokugqibela zokutya, ke kufanele ukuba ibe yinkqubo ehamba kancinci. Ukuba iipellets zipholile ngokukhawuleza, Izikrelemnqa kwiindawo ezingaphandle ziyenziwa, ethi yona ikhokelele kubrasion ephezulu. Ngaphezu koko, kunye nexesha lokuphola elifutshane, indawo yangaphakathi yeepellets ishushu kwaye i ipellets zihlala zithambile kwaye zinamathele. Kwaye ukupholisa kancinci kuya kwenza i-pellets ukuba yome kakhulu, nto leyo ikhokelela kukungafuneki.
2. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iipellets ezincinci zikhupha ubushushu kunye nokufuma msinya ngakumbi kuneepellet ezinkulu. Nokuba ukuhanjiswa kwee-pellets kwindawo epholileyo nako kukhulisa inkqubo yokupholisa.
3. Ukuthetha jikelele, isantya somoya kwindawo yokuhamba epholileyo kufuneka ihlale phakathi 0.8 kwaye 1.5 Nksk
Umatshini wokuPhola wePercole wePolet oPhakathi
Umzekelo VTLN1.5 VTLN2.5 VTLN4 VTLN6 VTLN8
Umqulu opholileyo 1.5 m3 2.5 m3 4 m3 6 m3 8 m3
Imveliso 3 h / h 5 h / h 10 h / h 15 h / h 20 h / h
Amandla oMvalo 0.37 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw